Yintoni Izihloko Ngaba Book Xoxa? — UHAMBO LEE - SITE OFFICIAL
JTDean • EyoMqungu 27, 2015 ngexesha 11:39 mna • impendulo
Yinto ke Crazy nam Ndiphangela Kanye kunye New Inkampani Ngokuba Vuka, Oko Ngaba Musa Ngoko kakuhle ,Kodwa ndiza Baguquka Up Ukuze ufunde Le Ncwadi New ukuba oluya kuxhobisa uLutsha Isizukulwana abadala loo nto iSuper Cool ukuba ngumKristu Yazi, Wena Ayikwazanga Hambani NBA,NFL, MLB. Dlala isoka, Run Track, ukuvelisa ingaoma, Yiba Actor, okanye Actress. Isibhakabhaka siyanqanda, apho kukho uMoya weNkosi umi, kubakho inkululeko nenkululeko Iindaba ezilungileyo ngoYesu Kristu. Ndinombulelo Ngokuba Lecrea ,Tedea le,kwaye Wonke Ku 116 nqakraza ,Thina Zukisa uThixo ,Thina Zukisa uThixo kwaye Ayikwazi alinde Ukwenza Le Vuka Entsha Incwadi !!!!!!!Yena Ofanele ,Nguye ongowokudunyiswa!!!
david • EyoKwindla 29, 2015 ngexesha 5:06 pm • impendulo
Yiyiphi incwadi eyoyikekayo! Trip Lee uzikhuphelele kufuneka ufunde incwadi zonke elivisayo. Ndandingakwazi ukuyibeka phantsi. 5 ngaphandle kwe 5 iinkwenkwezi.
david • EyoKwindla 29, 2015 ngexesha 5:18 pm • impendulo
uhambo, Mna sele ethandaza ngemiba zakho zokulala.;) Siyathemba ukuba uzive ngcono:D
Yves • UCanzibe 30, 2015 ngexesha 2:14 mna • impendulo
uhambo, Andizange ufunda. Kodwa ngokoqobo uThixo sandivusa ebuthongweni bam kunye nezinye zandenza ndaqiniseka ukuba ukuthenga incwadi yakho “phakama”. indoda, Mna andikubalekelanga wayigqiba kodwa ndiyaqonda ukuba ukuphelisa phantse 99.9% ingxaki ukuba uthetha ngabo Vuka. Eqonda ukuba lo linyathelo lokuqala eliya wam uphila kunye notshintsho. Yinto incwadi umntu omkhulu, kwaye nam ngokuba uthando kunye nenkcubeko hip hop, Ndiya kumdumisa uYehova lo uthetha nam ngokusebenzisa Rapper / Pastor. Andinako ngokupheleleyo zinxulumene kuyo…
enye into, Ndiyanithanda bhetele xa umbhali kunokuba rapper kodwa gcina ukwenza umsebenzi kakhulu eli bali kaThixo omkhulu :)
ibholithi • Isilimela 4, 2015 ngexesha 1:09 pm • impendulo
Uhambo lee yiGolgotha ​​eyona! Siyawubulela umsebenzi wakho apha Nigeria. Wena bhuti intsikelelo, enkosi. @iamslizybolt #rhemaprocess #116
PK • Isilimela 26, 2015 ngexesha 3:25 pm • impendulo
uhambo, Ndathenga incwadi yakho kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo kwaye ngokwenene indlela abaluleke wena. Umnqwazi inkanuko yakho ukukhonza iNkosi yethu yaye kusenza ukuba kuqhubeka uphila indlela uThixo ufuna siphile. Mna awuyifumani makwenziwe incwadi yoko kinda loo 7 ngentsimbi sengqiqweni esiya ngalo mzuzu LOL! Ke mna ngenene waphefumlelwa incwadi yakho. Enkosi, ubhuti! inkosi ikusikelele!
Alan • EyeKhala 17, 2015 ngexesha 11:24 mna • impendulo
UMzalwana Iintsikelelo kuKristu
Chara • EyeThupha 7, 2015 ngexesha 9:33 mna • impendulo
Ndichulumance kakhulu ukuba le ncwadi!! Ndathi internet kwaye ndiye sikulinde ukuza. Ndandingaqinisekanga ukuba kutheni ngoko ndanxulumana lo, ingakumbi xa sicinga Ndinazo nezinye iincwadi ezininzi kwi encwadini yam kwithala ukuba andifumananga ukufunda kwaye musa ngokwenene kuba izicwangciso ukufunda naliphi ixesha ngokukhawuleza :-) Kodwa bendikhe silinde Vuka yaye ekugqibeleni bafika izolo. Xa kufika ekhaya kukho ipasile emnyango kwaye kulindeleke ukuba le ncwadi. Icacili phandle ukuba ncwadi ngenqanawa USPS kwaye kwiposi yam. Yempahla ise mnyango ipere yezihlangu ndiyalele. Oku kubalulekile kuba kanye kukho into for izihlangu Ndilibele ngokupheleleyo ndandisithi. Umyeni wam wathi kwakungeyomfuneko ukuba azise enye iperi izihlangu kule ndlu ndingathanga ndabagxotha izihlangu. Loo nto yokucinga iphosakele kum :-) Mhlawumbi yena emfumana ingqiqo yam ngenxa yokuba akazange athethe nto malunga izihlangu phezolo!! Ngenye indlela, emva kokuba abantwana baya kulala ndaqalisa ukufunda Vuka kunye kwisahluko 2 Ndandisazi ukuba mna kangaka nithathele ingqalelo le ncwadi. Izizathu baninzi kakhulu dwelisa kwicandelo izimvo kodwa mna kwisahluko 4 ngoku yaye sele ethethile miqulu kum. Ngokuyintloko ngenxa yendlela kubhaliwe kwathiwa nendlela ukuba iyiqhagamshelanise nezinye izinto. Ngenye indlela, Ndichulumance kwaye sele wabasikelela. Ndiza ukuba aqhubeke nokufunda ngoku kodwa ndathatha ikhefu ukubhala olu izimvo.
zokutyhomfa • EtiMnga 15, 2015 ngexesha 1:39 mna • impendulo
i-PST. atripe u've ibe blessin wokwenene kum. nd i ngokwenene siyambonga uThixo makin kum babonana u. apha Nigeria iicawa zethu zengingqi nangoku c rap ngokuba nt hayate ngumKristu
RobinRicheson • EyoKwindla 25, 2016 ngexesha 12:15 mna • impendulo
Mna kudala ndifuna ukuthenga incwadi yakho uze ufunde oko kodwa ubomi ufumana kunzima kangaka ngamaxesha. Kodwa kwemithana bamelane, kubomi bemihla usapho lwam kunye nam, Kristu usoloko efika kuqala.
Apha kwisixeko sethu Owensboro, Ky. ngalo ibandla lam kukho inkqubo ebizwa Friends of aboni. Abahlobo aboni yinkqubo yokuhlala lugxile kuKristu kwakhona kweziyobisi ugxininisa ngokubuyiselwa kunye noxolelwaniso amadoda nabafazi ukuba uKristu iinyaniso zeBhayibhile, uxanduva, kunye nezakhono zobomi. . .sizama ukunceda abazalwana noodade wethu kuKristu sifuna ukuxolelwa, ukuze bafunde kwiimpazamo zabo, ukwazi uThixo nokwakha ulwalamano lobuqu naye. abahlali, abasebenzi, ntliziyo bonke abantu ezimangalisayo!
nomyeni wam mna wenza iimpazamo elidlulileyo; engazi uThixo namnye kubo. namhlanje (3/24) besibhiyozela 15 iminyaka obuzukileyo umtshato kwaye ngeke sibe ngaphandle imzukisa uThixo esazi uthando lwakhe nobabalo. Le yinto sikhumbuza abantwana bethu bemihla!
Bekuya ngokwenene ukuba nani kweli Owensboro ngoAgasti 20 ukwenza ukuvela Friends yethu yonyaka aboni yokunyusa!
Kianna • UCanzibe 20, 2016 ngexesha 4:14 pm • impendulo
Ndiya ikopi wam. Ndiyathemba ukuba ukugqiba incwadi ekupheleni kule veki. Mna nandipha oko Kuba ndiyifunde ngoko kude,
KIANNA • Isilimela 26, 2016 ngexesha 1:33 pm • impendulo
CG • EyeDwarha 30, 2017 ngexesha 10:41 mna • impendulo
Uhambo incwadi yakho iyamangalisa!! Indincede ekuhambeni kwam noThixo kwaye ndizifumana ndibhekisa kuyo kaninzi-ninzi. Inemigaqo ethile elungileyo. Isahluko endisithandayo ngu 4 Akukho maKristu aphezulu. Incwadi yakho ubomi obuhle buyamangalisa nayo!